OPS Izimpahla Eziphelele, Eco-Friendly Household Cleaning | Ibhulogi
Amapayipi ayi-10 Asetshenziselwa Ukuhlanza Amathebula ayi-40 Liters Washer Fluid
Emakethe, kukhona abanye abathengisi abahlinzeka ngamaphilisi we-washer we-windshield. Kungani ukhethe thina?
Imvelo futhi akukho monakalo ewindini
Ukuhlakazwa okusebenzayo futhi kushiya umkhondo.
Susa ngokushesha uwoyela, ukungcola, uthuli.
Thambisa okokuhlanza futhi wehlise umsindo.
Hlanza iwindi nokushayela okuphephile.
Ithebhulethi enkulu enkulu (i-5 gramu), elingana namanzi anele we-wiper!
Ukwaneliseka okungu-100% ngensizakalo yamakhasimende enikeziwe.
Asebenza kanjani amaphilisi okuhlanza asebenza kahle?
- Isebenza kahle kakhulu ekususeni amachaphaza ezinambuzane, ubulembu bezinyoni, ubisi lwesihlahla kanye nokungcola komgwaqo kusuka efasiteleni lakho langaphambili. Ungayisebenzisa futhi ukuhlanza izibuko nanoma iyiphi enye indawo edinga ukucwebezela futhi icwebezele! Kuphephe kuyo yonke insimbi, amafasitela angaphambili nengilazi, injoloba, upulasitiki nendawo eqoshiwe.
- Akushiyi mkhondo noma ukubonakaliswa kokubonakala okukhulu nokuphepha. Ngaphezu kwalokho, ayiqukethe
ama-fluorescent agents futhi awulimazi izingubo nomzimba. Ezemvelo, ezibolayo, ezingenayo i-phosphate,
nefomula engenamaphunga. Chaza kahle ngaphandle kwezinsalela!
- Ixubeka ne-antifreeze agent, ukwenza ngcono ukuhlanzwa kokusebenza ebusika. Qaphela: Sicela wazi ukuthi lokhu ukwakhiwa kwehlobo. Ngeke ivimbele amanzi ekubandeni etankini lakho.
- Le thebhulethi yewashi lesivikelo somoya izokongela imali eningi uma iqhathaniswa nokuthenga i- “classic” washer fluid.
Amaphebhula ayi-10 Asetshenziselwa Ukuhlanza Amathebhulethi, Uzothola ama-40 Liters we-Wiper Fluid.
- Faka esikhundleni uketshezi lokuhlanza lendabuko! Ithebhulethi ilula kakhulu ukuthutha nokugcina ngokuqhathaniswa namathini ajwayelekile.
Uwasebenzisa kanjani amaphilisi wokuhlanza kahle?
1: Chaza amaphilisi ebhodleleni lamanzi bese, uma usuqedile, uwachithele ethangini bese ugcwalisa amanzi.
2: Hlukanisa noma ugaye amathebulethi, uwathele echibini le-washer lesikrini somoya bese ugcwalisa ngamanzi.
Emaminithini ambalwa, bayazichitha, kuphele kanjalo.
Izinga lilingana nanoma iliphi i-4 € noma i-wiper engu-5 ngebhodlela ngalinye elingu-5 kusuka esitolo esikhulu noma okufanayo,
futhi ngokungadingekile ukusho, kushibhile!
Imininingwane engaphezulu, sicela uchofoze lapha!
Izigaba Ukukhangisa Shiya amazwana
Kungani usebenzise ukugeza imoto okungathinti?
I-Carless Touch Car vs i-Hand Wash
Ukuwashwa kwezimoto okungenantambo kwaziwa nangokuthi ukuwashwa kwezimoto ngamakhemikhali, futhi kusebenzisa iSodium, i-wax ukugeza imoto.
Lolu hlobo lokuwashwa kwezimoto seluthole ukuthandwa njengolunobuhle obuhle kakhulu be-eco okuhlukile kwendabuko
imoto echitha amanzi igeza. Ukuwashwa kwezimoto okungenantambo kungasiza kakhulu esifundeni esikhungethwe yisomiso, lapho ukuswelakala kwamanzi kuyinkinga.
Kunemikhiqizo eminingi yokuwasha izimoto emakethe, futhi umkhiqizo ngamunye uhlukile kokusebenza kwawo.
Uhlobo lokuqala lwemikhiqizo ye-OPS engachukumiseki yokuwashwa kwezimoto iqukethe ikhemikhali efana ne-sodium gluconate,
Isosteareth yokwephula ukungcola nokuhlanza imoto ngempumelelo. Umkhiqizo uqukethe izithako zemvelo, eziphilayo
okungaboliswa kalula okubolayo, i-oilree, futhi okungenabo ubuthi. Enye ifomula yenziwe nge-carnauba wax futhi ithandwa
nabathandi bezimoto abajabulela umkhiqizo bobabili ihlanza futhi i-wax futhi ingenza imoto ikhanye.
Yize kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo yokuhlanza izimoto ethintekayo etholakalayo, ngayinye isebenza ngempumelelo ngendlela efanayo
ukugeza imoto. Uma efuthwa emotweni, lawa ma-ejenti abopha izinhlayiya zobhuqu ukuze azixebule
ebusweni bemoto. Okulandelayo, uyihlanze ngokucindezela okuphezulu kwe-washer kusuka phansi kuye phezulu.
Njengokulandelela, ithawula elithambile noma ithawula le-microfiber lingasetshenziselwa ukukhukhula okusele okusele.
Uma kuqhathaniswa nokuwashwa kwezimoto zendabuko, le mikhiqizo yokugeza izimoto ingonga abathengi isikhathi futhi yonge amanzi.
Isikhathi sokumanzisa nokomisa siyasuswa, ngakho-ke isikhathi esidingekayo sokugeza yonke imoto usebenzisa ingaphandle le-OPS
imikhiqizo yokuhlanza inganqunywa phakathi. Ngokwengeziwe, imikhiqizo eminingi yokuwasha izimoto ikhomba lokho okujwayelekile
Ukuwasha imoto yasendlini kusebenzisa amalitha amanzi angama-200. Ngaphandle kwalokho, ukugeza imoto yendabuko nakho
kubangele "imfucuza enobuthi," ngoba amanzi angcolile agcwele ukungcola, ukungcola, namafutha angasebenza nemoto
Ngaphandle kwalezi zinzuzo ezinhle "eziluhlaza", imikhiqizo yokuwasha imoto engathinteki isenabo abanye abangabazayo.
Abashayeli bezimoto abaningi bendabuko baxwayisa ngengozi yokusebenzisa amakhemikhali ukuhlanza ubuso bemoto,
okungadala umonakalo omkhulu kupende. Futhi, ngemikhiqizo ehlukahlukene yemoto ehlanzekile emakethe,
eziningi ziqukethe izithako ezingavunyelwe noma ezingaziwa. Kunconywa ukuthi ngaphambi kokuthenga noma iyiphi yale mikhiqizo,
abathengi kufanele bacwaninge isithako esisebenzayo kumkhiqizo ngamunye ukuqinisekisa ukuthi kuphephile ukusetshenziswa kuwo
imoto enomthelela omncane ekugcineni.
I-Windshield Washer Fluid enhle ka-2020
July 28, 2020 July 28, 2020 by admin@opskar.com
Ngenxa yezizathu zokuphepha, kubalulekile ukugcina isivalo somoya semoto sihlanzekile!
Amatafula we-washer we-Windhield washer anamandla, anamandla we-wiper we-ecrafo yomoya agxilisa lokho
kuqinisekisa umbono osobala. Hlanza uphinde ukhiphe iwindi langaphambili bese womile ngaphandle kokushiya imichilo noma izinsalela.
Ithebhulethi ngayinye exutshwe namanzi ngaphambi kokuyithela ethangini lemoto.
Lezi zibhebhe zokuhlanza umoya zenziwe eChina futhi zimane ziyashintsha.
I-weldhield yomoya eyenziwe ngendlela yamathebulethi e-dravescent ukubeka ngqo ethangini
kuhlinzekelwa uketshezi lwewashi lesivikelo somoya semoto yakho, engeza u-4.0 - amalitha ompompi noma amanzi asebhodleleni.
Gcina amanani abalulekile emali ku-fluid yakho ye-wiper fluid. Ngempela, ukusetshenziswa kwethebhulethi elilodwa le-wiper
ihlanganiswe emanzini kampompi ithatha indawo engafinyelela kumalitha ama-4.0 womkhiqizo wendabuko we-canister yendabuko.
Ngenxa yesimo sethebhulethi yakho kanye nokuhanjiswa kwaso ebhokisini elincane eligcinwe egumbini lakho lomguli, ephaketheni.
Isibonelo, lethebhulethi yokuhlanza kahle isilungele ukuyisebenzisa futhi kulula kakhulu ukuyiphuza.
Khohlwa ngezigubhu ezidlula esiqwini semoto yakho. Amaphampu we-wypscreen wiper ayasebenza,
kwemvelo, futhi ngaphezu kwakho konke kuyonga kakhulu: ibhokisi elilodwa liqukethe amaphilisi ayishumi,
okulingana namalitha angama-40 we-fluidhield wiper fluid, futhi kubiza kuphela kuthatha amadola angama-2.15.
- Okwe: Kushibhile futhi kuyasebenza.
- Isici: Kugxilwe kakhulu nge-Ultra, kuyonga.
- Ukuphepha: Akushiye inzika. Akunabungozi ngopende, oplastikhi, kanye nodoti.
- Uhlobo lwamanzi: Amanzi ompompi, amanzi amaminerali, amanzi ahlanziwe, amanzi akhethiwe. (Hhayi sebenzisa amanzi angaphansi komhlaba).
- Ngokumelene: Imodeli efanayo ayisebenzi unyaka wonke.
- Amandla: Ithebhulethi ehlukile ye-5 gram emakethe. Ukugxila ngokwengeziwe, Ukuhlanza okunamandla!
Ithebhulethi eyodwa ye-Vision Tabs yanele ukukhiqiza amanzi afinyelela ku-4L
Izibhebhe ziyi-antifreeze, ngakho-ke ithangi lakho lizovikelwa lize lifike ku-0 degrees Celsius,
ukuvumela ukuthi usebenzise lo mkhiqizo unyaka wonke cishe emazweni.
Ngokushisa okungaphansi kwe-zero, ungangeza i-antifreeze yakho ejwayelekile.
Ezomnotho kakhulu: ngaphansi kwenani lomgqomo, ilondoloze izindleko eziphindwe izikhathi ezi-3-4.
Kulula ukuyigcina, ngeke kusadingeka ukuthi ugcine imigqomo ecishe ibe nalutho,
futhi ungagcina amalitha amaningi wezinto zokuwasha umoya endaweni encane.
Imvelo: Amathebulethi we-Biodegradable, ngaphandle kwe-phosphate.
Ukuncishiswa kokuphuma kwgesi kwe-CO2 kokubili kwezokuthutha nokwenziwa kwesigubhu nokuphinda kusebenze kabusha.
Isetshenziswa kanjani: Mane ubeke ithebhulethi ethangini elingena emotweni yakho bese ugcwalisa ngamanzi ampompozayo
(amaphilisi aqukethe ukwelashwa okwenzelwe ngaphakathi). Emizuzwini eyi-10, amaphilisi ancibilika ngokuphelele
ngaphandle kokushiya insali. Kungase kungabi ngumqondo omuhle wezimo sezulu ezibandayo ngoba kufanele ubeke
antifreeze eceleni noma usebenzise i-wiper fluid ngezithako zotshwala.
Ufuna umakhi wethebhulethi washer we-Windshield ethembekile, Contact thina!
I-Best Car Interior Cleaner 2020
July 23, 2020 by admin@opskar.com
Ungawukhetha kanjani umkhiqizo omuhle kakhulu wokuhlanza ingaphakathi lemoto?
Kufanele wazi ukuthi izindawo ezingcolile kakhulu ngaphakathi kwezimoto yizindawo ozithintayo, okusho ukuqondisa
isondo, ibhande lesihlalo, isibonisi esigudlukayo kanye nephaneli lomnyango ohlangothini lomshayeli. “V” phakathi kwemilenze yakho,
lapho umoya wakho we-Egg McMuffin nomoya wekhofi up, nawo ungangcola kakhulu. Thola lezi zingxenye futhi
hlela ukusebenzisa imizuzu embalwa eyengeziwe uyihlanze.
Uma uhlanza amabhande esihlalo, sebenzisa kuphela okokuhlanza okungathathi hlangothi, okwemvelo.
Kuzovikela ubuqotho bendwangu yebhande.
Ideshibhodi namaphaneli ezimoto kufanele asulwe ngendwangu enyibilikisiwe ngamanzi.
Ukususa i-grime, sebenzisa indawo yokuhlanza enezinjongo zonke, ehlanjululwe ngamanzi. Njengasikhathi sonke, sebenzisa umkhiqizo omncane kakhulu.
Udinga ukuqeda iphunga?
I-OPS isebenza kahle kakhulu, Iyakhumuka njengoba ihlanza futhi ishiya iphunga elimnandi emotweni.
Akunandaba noma wenzani emotweni yakho, yiba mnene. Ngenxa yabakhiqizi '
intshisekelo yokonga imali, nesifiso sokukhulisa umnotho wamafutha we-EPA, okuningi
abakhiqizi basebenzisa izinto eziqinile ezingatheni. Uma usebenzisa umkhiqizo osezingeni elibi kakhulu,
ingalimaza unomphela noma ilimaze imoto yakho.
Ukuhlanzeka okungaphakathi kwemoto kwe-OPS okwenziwe nge-enzyme yemvelo neyendalo,
lungasetshenziselwa izindawo ezinzima ukufinyelela kuzo futhi lunikeza imiphumela yokuhlanza esheshayo ne-streak-free.
I-cleaner asuse uthuli lomgwaqo kahle nangobumnene, izinambuzane, i-nicotine ne-silicon.
Ilungele zonke izindawo futhi inikezela ukuhambisana okuhle kakhulu, isb, upende, injoloba, isikhumba,
izingxenye zepulasitiki emotweni kanye ne-upholstery.
Ungayisebenzisa kanjani isitholi se-enzyme ye-orange?
Cwilisa impuphu noma uketshezi ukufafaza ibhodlela. Qala ngesikhuhli samanzi esingu-80: 1
Ukuhlushwa nokukhuhla kahle. Uma lokho kungasebenzi, khulisa kancane isilinganiso uze uphumelele.
Fafaza endaweni engcolile, sebenzisa indwangu ye-lintfree, ithawula lephepha, indwangu ye-micro-fiber noma isipanji
sabalalisa ngokulinganayo endaweni ezohlanzwa.
Ingasetshenziselwa ukuhlanza ingaphakathi lezimoto zabagibeli, ama-4wd, izithuthuthu,
izimoto zasolwandle nezentengiso nasekhaya noma ehhovisi.
Imvelo futhi biodegradable
Gcina izindleko, ezomnotho ongazisebenzisa
I-Deodorises njengoba ihlanza
Isusa ukungcola namabala amaningi
Ngabe ufuna ukudala isimo samaphrotheyini wezimoto zakho, ikhaya noma ihhovisi? Xhumana nathi lapha!
Kuyini iTouchless Car Wash
July 18, 2020 by admin@opskar.com
Kuyini iTray Carless Car Wash?
Ukugeza imoto okungaxhunyiwe kusebenzisa isher ye-high-pressure kanye namakhemikhali ku- Hlanza imoto ngaphandle kokuthinta It.
Inzuzo enkulu yalolu hlobo lokugeza izimoto ukuthi upende osemotweni alonakalanga indlela
kungaba ngemoto yokuhlanza esebenzisa amabhulashi. Hhayi lezi zokuhlanza imoto kuphela ezinikeza indlela esheshayo futhi elula
Hlanza imoto, kepha futhi iyaphumelela ekususeni ukungcola.
Uma imoto ingena ku-carwash, asikho isidingo sokugezwa kwangaphambili bese kusulwa ngesandla,
lungisa i-shampoo yokugeza imoto noma insipho, bese ufafaza ngokuthe ngqo endaweni yemoto kusuka phansi kuya phezulu.
Ikhambi lokuhlanza livunyelwe ukuhlala emotweni isikhashana bese ligezwa. Ngemuva kokuthi imoto ihlanzwe,
ukugeza okunamandla kufafazwa ngemoto, kome, futhi kuvimbele ukwakheka kwezindawo ezinamanzi.
Kunezici eziningi ongazikhetha ekugezweni kwemoto okungaxhunyanwa nomuntu angakhetha kuzo
bafake isicelo emotweni yabo. Ukugeza imoto okungekho oxhumana nabo kungahlanza igiya lokubamba namasondo,
ngaphezu kokuhlanza umzimba wemoto. Kungenzeka futhi ukwengeza ungqimba we-wax
ngohlelo olufanayo ngaphandle kokuxhumana. Lezi zinketho ziqedwa ngaphambi kokuba imoto yome.
Izisombululo ezahlukahlukene zingasetshenziswa ekuhlanzeni imoto ekugezeni okungahambelani naye kwezimoto.
Insipho esetshenziswayo ingaba nephunga noma ibe nombala futhi imvamisa i-acidic noma i-alkaloid.
Lokhu kuphambuka okuncane ezingxenyeni ezijwayelekile ze-hydrogen (pH) kusiza ukukhulula ukungcola emotweni.
Iziteshi eziningi zokugeza izimoto ezingenabo oxhumana nabo zinikeza nezixazululo ezinobungozi bemvelo.
Abanikazi bezimoto abaningi bakhetha ukusebenzisa i-car wash yokuxhumana engathintwa ngoba uhlelo luvikela umsebenzi wokupenda wemoto.
Futhi, azikho izingqimba noma izingxenye zomshini ezingathinta imoto zilimaze izibuko noma ama-antennas.
Futhi, a ukugeza izimoto okungaxhunyiwe kungaqedwa ngokushesha, okwenza kube ukhetho olufanele kumuntu onaye
asikho isikhathi sokugeza imoto ngesandla.
Yize iziteshi zokuxhumana zokugeza izimoto zingenabo ukuxhumana ziyindlela edumile yabanikazi bezimoto,
abajwayele ukushiya imoto ihlanzekile njengendawo yokugeza izimoto zendabuko.
Ngoba ezinye izinto zokugeza izimoto azithathanga umphumela omuhle kakhulu.
I-OPS yokugeza imoto engenathinteki ingenza ikhono lokuhlanzeka eliphezulu namandla amakhulu
shampoo, insipho, okokuhlanza. Sizoyibulala lendabuko. Unentshisekelo engaphezulu? Sicela uxhumane nathi lapha!
Izigaba Ukukhangisa 2 Amazwana